ophuhliso kwimakethi Cryptocurrency ku 2018 - Blockchain News
EyoMqungu 7, 2018 admin
ophuhliso kwimakethi Cryptocurrency ku 2018
Ngenxa kuqaliso ikamva bitcoin nezakhi kwi-stock zemveli; ukusekwa abangaphezu 100 imali uthango ukuba urhwebo cryptocurrencies; kunye olusisiseko lwe cryptocurrency kakhu- ngaphezu $500 billion ngo 2017, iingcali ngobulungisa bakholelwa ukuba cryptomarket yangoku iye yaba ezanda noshishino nathembisayo kwisizukulwana sethu. Sihlangene izimvo kunye uqikelelo neengcali kunye nabadlali abaphambili kushishino kuphuhliso kwimarike cryptocurrency ku 2018.
I-CEO of Node40, inkampani yolawulo blockchain kunye nokuthotyelwa irhafu cryptocurrency, Perry Woodin ikholelwa ukuba 2018 uza kuba ngunyaka ulwazi abaninzi loluntu ukulungiselela cryptocurrency.
Liya kuba ngunyaka apho yonke umhlobo kunye isalamane iya kufuna ukuba wazi kangakanani kwaye ukuba uthenge ngayo, Woodin uthi.
Alithandabuzeki elokuba zikho kuya kubakho ukunyuka kwenani labantu abasebenzisa cryptocurrencies. Jonathan Sela, uphuhliso lwamashishini SVP zedrama yi YouNow, esebenzisa blockchain ukwakha eziphilayo media, ilinganisela ukuba ekupheleni 2018, siza kubona phezu 50 abantu million emhlabeni ubambe cryptocurrency ubuncinane enye. Nangona uphando entsha London Block Exchange (LBX) kuye kwagqitywa ukuba ekupheleni 2018 omnye millennials ezintathu uya imali emakethe crypto.
Isigqibo stock zemveli CBOE kunye CME ukudwelisa bitcoin lekusasa iinketho izivumelwano wenza cryptocurrency yokuqala yehlabathi kunye, mhlawumbi nje, nezinye cryptocurrencies, iklasi entsha asethi efanayo amatye anqabileyo, kwemithombo energy, kwiibhondi zikarhulumente, kunye nezinye iimpahla nezibambiso ezininzi. Ngaloo ndlela, kunyaka olandelayo isikhundla cryptocurrencies ziya kuba esemthethweni ngakumbi kwinkqubo yemali neyomthetho ezikhoyo. Simon Yu, CEO of StormX, izabelo la mazwi. Uyaqiniseka ukuba 2018 ziya kuba yenye minyaka ilungileyo cryptocurrency nizihlabe imarike ukuya kwinqanaba entsha.
Kude kube ngoku sele abatyali ikakhulu ngemiyinge eliqhubela ixabiso bitcoin kunye nezinye cryptocurrencies. Ekubeni ikusasa emarikeni kunye iinketho ukunciphisa risk profile, abatyali ngaphezulu kumaziko ekugqibeleni kuya kuba nako ukuqala ukutsiba. Kodwa Izixhobo zemali, sabona zizigidi zeerandi imali flow lweziko kwithuba leminyaka embalwa ezayo.
Shidan Gouran, UMongameli Global Blockchain Technologies, akukho mathandabuzo ukuba cryptocurrency uya kubona impumelelo okukhulu ngakumbi kunina ku 2018.
“Nangona ipesenti ebonakalayo yabantu umboleki noba usebenzisa okanye, Nangona, ekhululekile cryptocurrencies, Kukwanjalo Akukabonakali wathi oorhulumente kunye namaziko. Oku kulindeleke, njengoko imibutho, kwinzaliso, akholisa ngokuba ezigoso zokufunda elide ngokwamukela ubuchwepheshe ezintsha. Sivakalelwa ukuba lo curve yesifundo iya kuba zizityalelo cryptocurrency kunye blockchain uphuhliso 2018, neengcambu ezininzi imiqobo wamalela ukubandakanyeka koluntu lweziko kule nkalo. Oku kuzakuzisa wonke kwi iphepha elinye, ekwandiseni kakhulu amandla ubuchwepheshe kunye nokuthabatha inxaxheba kumaqumrhu eziphezulu, ekuvuleleni ukusebenza bekungayi kuba ukuba kunokwenzeka ngenye. Phakathi utyalo lwamaziko baqhubeka cryptocurrencies, umnikelo amakamva bitcoin-based, kunye noorhulumente ekuqaleni ukusebenza kwiiprojekthi zabo blockchain ezabo, apho sele iimpawu zezi technologies ababamba ngalo kumanqanaba karhulumente neyeziko. we, ke, ukuqikelela ukuba 2018 uya kubona ukukhula okuzinzileyo kunye nokwamkelwa, ukwakha ngenkqubela ekhoyo ukuza kuthi ga ngokwamkela abachaphazelekayo ezintsha”.
Ngokutsho CEO of Biddable Mark Lurie, abatyali emininzi iza kugxininisa enye i cryptocurrencies, kubandakanya litecoin, dash, kunye umthambo, kunokuba bitcoin okanye kaEtere. Lurie ukholelwa ukuba imali, ngo 2018, kukho kuza kubakho push okunamandla cryptoassets abangafaniyo kunye nolawulo investment crypto ziya kusingathwa ngendlela abatyali jonga asethi yesintu imali.
mike msebe, CEO ye Crypto Company, kuqatshelwe ukuba hexa ngaphantsi e Bitcoin wayeza nefuthe kwi cryptocurrencies ezizezinye kwaye kwakhona uza kubona nokuvela izibambiso kuJuda. Ucingela ukuba cap lemarike $5 zezigidi ekupheleni konyaka.
Dmitriy Zhulin, Co-umsunguli INS Ecosystem, ulindele ukuba njengoko nobugcisa blockchain iyaqhubeka ukuba balolonge, bitcoin uya kukhula ukuya kutsho malunga $30-40,000 ngo 2018 ngokusekelwe lula kunye nokwamkelwa ngakumbi njengendlela kulondolozwe yentlawulo kunye capital. Ngaphezu, Trevor Koverko, uMongameli Canadian Polymath yenkampani, ukholelwa ukuba Bitcoin iya kuvela kwenethiwekhi yentlawulo a.
“Kungoku nje Bitcoin isetyenziswa njenge-asethi lentelekelelo noovimba ixabiso. Kodwa njengoko ukunciphisa izisombululo ezifana network njengombane kuvela ( inethiwekhi Bitcoin-based, evumela abasebenzisi ukwenza inani esinganasiphelo micropayments - DeCenter), eluncedo bitcoin kaThixo kukulinyusa kunye ixabiso layo. Umbuzo real kuya kuba bitcoin 'chain eyinhloko’ ukuba unalo nesibindi ukuze amkele ezi uphuculo okanye kuya kuba elinye chain ezifana Bitcoin Cash?”
ophuhliso kwimakethi Cryptocurrency
7 Best Training Blockchain Development, Nezifundo kunye izitifiketi
Post Next:ntoni ubuchwepheshe blockchain ukuphuhlisa njani 2018?